Deeqaha - Muuqaalka Cradle
Dhammaan deeqaha waxa loo isticmaali doonaa si ku habboon
Maxaa noogu deeqay?
Wax kasta oo deeq ah oo nalagu deeqo waanu qiimaynaynaa, tanina aad bay noo caawin lahayd haddii aad wax ku tabarucdo. Ka tagista like iyo muujinta taageeradaada habkan waa hab kale oo aan ku kori karno goob ahaan. Waxaan kuu rajaynaynaa wanaag, fadlan si xilkasnimo leh wax ugu deeq. Dhammaan deeqaha waa la tirin doonaa waxaana lagu kharash garayn doonaa si waafaqsan walxaha si loo caawiyo View Cradle, si rasmi ah cradleview.net oo aan ujeeddo kale lahayn.
Hoos waxaan kuu haynaa xoogaa ikhtiyaar ah dhammaantiin. Haddii aadan heli karin qiimo kugu habboon, fadlan nagala soo xiriir bogga xiriirka. Ama iimayl noogu soo dir adoo isticmaalaya iimaylka aan bixinay.
Deeq dhan $1
Deeq la siiyo milkiilayaasha Cradle View si rasmi ah cradleview.net si ay uga caawiyaan boggooda Dhammaan lacagaha waxaa loo isticmaali doonaa si waafaqsan.
Deeq dhan $2.50
Deeq dhan $5
Deeq dhan $10